Alliance Voary Gasy : Hozaraina amin’ ny Malagasy ny andramena -
AccueilSongandinaAlliance Voary Gasy : Hozaraina amin’ ny Malagasy ny andramena
Alliance Voary Gasy : Hozaraina amin’ ny Malagasy ny andramena
12/10/2018 admintriatra Songandina 0
Manahy mafy ny amin’ ny mety hiverenan’ny fanondranana andramena ireo fiarahamonim-pirenena, misehatra amin’ ny tontolo iainana tahaka ny “Alliance Voary Gasy”, amin’ izao fotoanan’ny fampielezan-kevitra izao. Na dia teo aza ny fanatsarana tokony hoentina anatin’ ilay “business plan”, nivoriana tany Rosia ny faharoan’ ny volana oktobra lasa teo. Fanehoan-kevitra voalohany notanterahin’ ny voary gasy ity omaly ity, taorian’ny fanapahan-kevitry ny Cites. Fanambarana izay nataon’ izy ireo farany, dia ny tsy tokony hanonerana ireo mpandraharaha manana tahirin’andramena, satria hampitombo ny fanapahana tsy ara-dalàna indray izany. Ankehitriny kosa dia azo lazaina fandresena ho azy ireo ny fanapahan-kevitra fanatsarana ilay drafitra, entina hamarotana ireo tahirin’andramena . Nambaran’ny tompon’andraikitra voalohan’ny Voary gasy, Razakamanarina Ndranto, fa mampanahy be ihany ny zava-misy ankehitriny amin’ny lafin’ny andramena, satria hiaraha- mahalala hoy izy fa matetika ny vola azo amin’ny harena sarobidy eto Madagasikara no lasa famatsiana ara-bola ny fampielezan-kevitra.
Raha hiverenana kosa ny mikasika ny fanapahan-kevitry ny Cites amin’ilay drafitra ahafahana mamarotra ireo tahirin’andramena, dia nilaza ny “Alliance Voary Gasy”, fa tsy tokony hamidy intsony ireo tahiry ireo fa homena ireo mpanao asa tanana. Izay dia hialana amin’ ny mety hampirongatra indray ny fitrandrahana tsy ara-dalàna hoy ny “Alliance Voary Gasy”. Ireo mpanao asa tanana ireo rahateo, izay manana olana amin’ny akora fototra, ary ny vokatra voahodina raha teo no azo hahondrana. Noho izany hoy ny “Alliance Voary Gasy”, raha toa ka mbola hisy ny fananganana ilay rafitra mahaleo tena hitantanana ny vola azo amin’ ny fivarotana ireo andramena, dia tokony ho tafiditra ny “Alliance Voary Gasy”. Ny vola izay azo dia tsy hiditra intsony anatin’ ny kitapom-bolam-panjakana. Noho izany ny fidiran’ny “Alliance Voary Gasy” anatin’ ilay komity misahana ny lafiny ara-bola; dia ahafahana manara-maso ny fitantanam-bola sy ny lalàn’ny vola voalaza anatin’ ilay drafitra.
Notsenain’ny vahoaka marobe teny amin’ny distrikan’Atsimondrano, tao amin’ny kaomina Soalandy Ankadivoribe ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly. Nanatanteraka fitsidihana sady nanolotra ilay fotodrafitrasa famokarana sy famatsiana rano fisotro madio tao amin’io kaomina io mantsy ny tenany ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Hampandroso avo 12 heny